Siria : Fifankatiavana anaty fotoanan’ny famoretana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra مرسيل شحوارو Nandika (en) i Amira Al Hussaini, Claire Ulrich, avylavitra
Voadika ny 17 Avrily 2020 7:38 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, English, Español, Dansk, Français, македонски, Português, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, русский, polski, Italiano, عربي
Ity dia ampahany amin'ireo andiana lahatsoratra nosoratan'ilay bilaogera sady mpikatroka, Marcell Shehwaro, izay manoritsoritra ny fiainana andavanandro ao Siria mandritra ny fifandonan'ny tafika manohana ny fitondrana am-perinasa sy ireo vondrona samihafa mpanohitra.
Lalaon'ny fo. Sary tao amin'ny deviantART an'i ZedLord-Art (CC BY-SA 3.0)
Hatramin'ny andro voalohany izy no nilaza tamiko hoe any am-ponja ny vadiny, ary nampihetsika ny alahelony ireo hira izay mahazatra ahy ny miventy azy. Tsy dia nanohina ahy manokana. Efa mahazatra anay ireo fianakavian'ny voafonja, toy ny hoe efa mandeha ho azy izany hoe migadra izany, ao anatin'ilay Siria an'i Assad, toy ny hoe olona miavaka ireo izay tsy any am-ponja (na mihevitra ny tenany ho tsy izany).
Nandritra ny sakafo hariva, angamba mba hahafantarana azy bebe kokoa fotsiny, dia nanontany azy manokana aho : “Fomba ahoana no nampidirana am-ponja ny vadinao ?”
“Voasambotra teny amin'ny toerana fisavana nosahanin'ny Andiany faha-4 amin'ireo fiara mifono vy aho teny an-dàlana mankany Daarya ao Damas. Rehefa nambarako ny vadiko ny amin'io, lasa nandray fiara sy nirifitra nankany amin'ilay toerana fisavana ilay adala be io mba hanontany hoe taiza no nisy ahy dia voasambotra koa izy,” hoy izy mitantara, nitolokon'alahelo.
Nisento izy, avy eo nanohy : “Aza mihevitra hoe ho fanaporofoany fotsiny hoe lehilahy izy no nanaovany izany. Tia be ahy ny vadiko. Tokantranom-pitiavana ny anay. ” Abaliaky ny alahelo mamololona ireo masony.
Dia tonga tamin'ny fametrahako fanontaniana tamin'ny tenako momba ny tanjaky ny fitiavana manosika lehilahy iray hamily fiara hatrany aminà toerana fisavàna sahanin'ny Andiany faha-4 amin'ny fiara mifono vy, teo ambany fitarihan'i Maher Al Assad, ilay zandrikelin'ny filoha, malaza amin'ny herisetra sy ny habibiany.
Nezahako nafenina ny fihetsehampoko rehefa nanontany azy aho raha mba afaka nifankahita indray ry zareo.
Tsiky no navaliny ahy, tàkany tsara ny fitia te-hahalala zavatra amin'ny maha-tanora ahy: “Tsy tonga saina mihitsy aho hoe nosamborina ihany koa izy, mandra-pahitako azy volana iray taorian'izay, tafaray tanaty fiara izahay rehefa nentin-dry zareo hafindra any amin'ny toerana hafa ireo voatazona. Nampijaliana izy, mazava loatra. Noraran'ny mpiambina tsy hiresaka tamiko izy, saingy tsy noraharahiany izany ary tamim-pahasahiana no nanontany ahy ny fahasalamako. Zara raha vitako ny nanetsika ny lohako mba hilazàna taminy fa tsy naninona aho, talohan'ny namerenan'ny mpiambina nitrerona azy indray. Hatramin'io andro io, volana sivy eo ho eo izao, tsy hitako intsony izy no sady tsy naharaisako vaovao. Tsy haiko akory aza hoe aiza no misy azy.”
Heveriko fa takatro ny halehiben'ny fifankatiavan-dry zareo, saingy taitra aho nilazany hoe : “Taorian'ny volana fito nifonjako sy ireo fampijaliana niaretako, ary tsy nieritreretako afa-tsy ny momba azy sy ireo zanako, rehefa afaka aho, tsy nilàko torohevitra na tamin'iza na tamin'iza, nandeha an-tsokosoko niditra tao amin'ny foiben-toeran'ny tafika an'habakabaka tao Damas aho.”
Zendana tamin'ilay fibabohany aho, ka tsy vitako ny tsy hikiaka hoe: “Ny tafika an'habakabaka hoe ? Ny rantsan'ny Aqsa ve ? Fa inona no antony nanaovanao izany ? Adala angaha ianao ?”
Nanganohano feno ranomaso ny masony. Manazava izy: “Reko fa hoe mety any ny vadiko, dia tsy maintsy nandeha tany aho ary nanontany. Notakiako ny hamerenana azy amiko. Nanontaniako izay toerana misy azy. Nikiakiaka aho. Fa norahonan-dry zareo hosamborina, noho izany, ireo zanako no tao an-tsaiko ka dia niverina nody aho. Rehefa fantatry ny fianakaviako ny zavatra nataoko, raiki-tahotra izy ireo ka dia nanery ahy handao an'i Libanona miaraka amin'ireo zanako.”
“Fa tsy afaka niaina tao Beyroth aho. Lavitra loatra an'i Damas. Tany akaikin'ny sisintany aho no nipetraka ary dia ny fiverenako any amin'ny tranoko foana no nobanjiniko. Mivavaha ho azy, ry Marcell. Mivavaha mba ho mbola velon'aina ry zareo ary mba ho tafavoaka velona amin'izao zavatra rehetra izao izy.”
Somary hanihany no nametrahako ity fanontaniana ity taminy : “Dia hanasa ahy hanatrika ny fety ve ianao?”
Novaliany tamin'ny feo feno fanantenana : “Mazava loatra.”
Na aiza na aiza aho no mitopy, anaty herisetra, ny rà na ny fahafatesana ao Siria, dia tafalatsaka foana aminà tantaram-pitiavana adaladala, feno fahasahiana toy ny raozy iray manao di-doha mitsiry na eo aza ireo ahidratsy sy ny tsilo miezaka mangeja azy. Misy ireo tantaram-pitiavana eny amin'ireo làlan-kely izay mankahàtra ireo mpitily miafina, ireo izay mitazona ilay tanàna voapasaka ho roa. Misy ireo tantaram-pitiavana eo amin'ny tanàna sy ireo tobin'ny mpitsoaponenana, ary ireo tanàna any amin'ny sisintany iraisana amin'i Tiorkia. Dia misy ireo mpihoko mitam-piadiana ho fanafahana an'i Siria izay mitia ankizivavy iray izay tsy ho azon-dry zareo atao akory ny hahita azy raha tsy mirodana ny fitondràna.
Izany no dikan'ny atao hoe miaina eo amoron-tevana. Mikitika fahafatesana ianao ary dia manesoeso azy no sady mifikitra mafy amin'ny fiainana, dia omenao dikany izy eo am-pikarohana ny tsikin'ireo olona lalainao.
Voamarik'ilay vehivavy namako, fototry ny tantara, fa tsy mitsahatra ny milalao ny vàkako (collier) aho, vàkana natolotr'ilay lehilahy tiako, no sady lasa saina. Manapaka ahy izy : “Ahoana ny tantarany ?”. Tsy niolankolaka aho namaly azy : “Mino aho fa mendrika azy ny hahita olona tsarakokoa noho izaho. Farafaharatsiny dia mendrika azy ny hahazo tovovavy iray tsy nosaininy akory hoe ho alin'ny fahafatesana an-kery sy ho henjehin'ny horohoro. Mendrika azy ny hahazo tovovavy iray manana fijery miabo sy ampitso tsara fototra, azony anorenana ankohonana.”
Mihomehy ahy sy ny valinteny kidaladalako izy: “Dia mino ve ianao fa nitia ahy ny vadiko raha toa aho ka tsy dia mpikatsaka fiovàna loatra ?” hoy izy manontany. Sahirana aho ny hamaly fanontaniana iray tsy ananako valiny.
Ny fitiavana irery ihany no mandraikitra antsika amin'ny tanintsika, ny hoavintsika ary ny fahalalahantsika. Raha tsy izany, mety ho sarotsarotra kokoa ny fiainantsika, tsy ho feno afa-tsy valifaty sy fankahalàna fotsiny.
Amin'ny fitiavantsika an'i Siria, ary ny fijery miabo ananantsika ho an'ny ampitso, ho resintsika ny herisetran'ny famoretana. Handresy isika.
Manoratra bilaogy ao amin'ny marcellita.com i Marcell Shehwaro ary mibitsika ao amin'ny @Marcellita, amin'ny teny arabo ihany. Ireo lahatsoratra hafa amin'ireo andiany dia azonao vakiana ato [mg], ato [mg], ato [ang] , ato[ang] ary ato [ang].
Nandika (en) i Amira Al Hussaini